infinite loop မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောနိုင်ပါသလား? — MYSTERY ZILLION
infinite loop မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောနိုင်ပါသလား?
August 2017 in Java
အောက်မှာရေးထားတဲ့ java code ဟာ infinite loop ဟုတ်ပါသလားလို့ မေးထားတာပါ။
}while (x > 0);
အဖြေမှန်က ဟုတ်ပါတယ် လို့ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
while expression က true ဖြစ်နေတဲ့အတွက် loop ကတော့ အလုပ်လုပ်နေမယ်။
ဒါပေမယ့် Java မှာ int type variable တစ်ခုရဲ့ range က -2, 147, 483, 648 ကနေ
2, 147, 483, 647 လို့ ပြောထားတယ်။
တကယ်လို့ x ရဲ့ တန်ဖိုးက 2, 147, 483, 648 ဖြစ်သွားရင် x က လက်ခံနိုင်သလား?
x က လက်မခံနိုင်လို့ loop က အလုပ်မလုပ်တော့ဘူးဆိုရင် infinite loop မဟုတ်ဘူး
August 2017 Administrators
Infinite လို့ပြောလို့မရဘူး int ရဲ့ range က -2,147,483,648 to 2,147,483,647 ဆိုရင် max (2,147,483,647) ကိုကျော်တာနဲ့ min (-2,147,483,648) ဖြစ်သွားလိမ့်မယ် အဲဒါဆိုရင် x >0မဖြစ်တော့ဘူး
August 2017 edited August 2017 Registered Users
အခုလို ပြန်ဆွေးနွေးပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်… ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ဆိုရင် အမှားကို အမှန်ထင်ပြီး မှတ်ထားနေမှာစိုးလို့ … loop နဲ့ ပတ်သက်ပြီး သိချင်တာလေး ထပ်မေးပါရစေ .. ကတ်သီးကတ်သတ် မေးတာ မဟုတ်ပါဘူး… တကယ်ကို သိချင်လို့ပါ … IF က selection statement (not iteration statement ) ဆိုတာတော့ နားလည်ပါတယ် … တကယ်လို့ IF ကို break go_ to_label; နဲ့တွဲပြီး infinite loop (iteration statement) ဖြစ်အောင် ရေးလို့ရလား … ရေးချင်တဲ့ နမူနာပုံစံက …
August 2017 edited August 2017 Administrators
Conditional Statement ဆိုတာ Iteration မဟုတ်ဘူးလို့တော့ တရားသေအနေနဲ့ ပြောလို့မရပါဘူး ဥပမာဆိုရင် အစောပိုင်း x86 Assembly တွေမှာ Iteration အတွက် Conditional Jump တွေနဲ့ပဲ ရေးကြရတာပဲ။ High-level Languages တွေမှာလည်း ကြံဖန်ရေးရင် ရေးလို့ရနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘာအတွက်ကြောင့် ရေးရတယ်ဆိုတာရှိတယ် High-level Languages တွေရဲ့ အဓိကရည်ရွယ်ချက်က လူနားလည်လွယ်ဖို့အတွက်ပါ။
ကိုယ်ရေးပြီးတော့ ကိုယ်ပဲပြင်ပါ့မယ်လို့ တရားသေလည်း ပြောလို့မရဘူး တခြားလူတွေ နားလည်ဖို့လည်း အရေးကြီးတယ်။ ကိုယ်တိုင်တောင်မှ ၁ နှစ်လောက်ကျော်ရင် Document မရှိ Comment အသေအချာ မရေးခဲ့မိရင် ဘာလို့ရေးမှန်း မှတ်မိချင်မှ မှတ်မိတော့တာ ၄-၅ နှစ်ဆိုရင်တော့ ပြောမနေနဲ့တော့။
Programmer တွေပြောလေ့ရှိတဲ့ Quote လေးတခုရှိတယ်
ရှင်းပြပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်…Quote လေးကို မှတ်ထားပါ့မယ်..